फोटोशुटले जेलको यात्रा ! आखिर ती मोडलले कस्ता तस्वीर खिचाइन् ? – rastriyakhabar.com
१४ पुष २०७८, बुधबार ०५:५६
काठमाडौं। इजिप्टमा फोटोशुटका कारण एक मोडल र उनको फोटो खिच्ने फोटोग्राफर जेल जानुपरेको छ । यी मोडलका फोटोहरु सामाजिक संजालमार्फत सार्वजनिक भएपछि इजिप्टमा बहस सृजना भएको छ । इजिप्टको मिडियाले यी मोडलका तस्वीरलाई ‘उत्तेजक र आपत्तिजनक’ भनेपछि सामाजिक संजाल विभाजित भएको छ । केहीले यी मोडल र फोटोग्राफरको आलोचना गरेका छन् भने केहीले इजिप्टको प्रशासनको आलोचना गरेका छन् ।